Fanaankii caanka ahaa Cabdi Tahliil Warsame oo xalay ku geeriyooday Muqdisho - Jowhar Somali news Leader
Home News Fanaankii caanka ahaa Cabdi Tahliil Warsame oo xalay ku geeriyooday Muqdisho
Fanaankii caanka ahaa Cabdi Tahliil Warsame oo xalay ku geeriyooday Muqdisho
Allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee Soomaaliyeed Cabdi Tahliil Warsame oo sanadihii u dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho.
Fanaan Cabdi Tahliil ayaa ku geeriyooday Isbitaal ku yaalla Muqdisho oo maalmo ka hor la dhigay, isaga oo la xanuunsanayay mallaariyo, sida ay xaqiijiyeen eheladiisa, waxaa horay uga dhacay Stroke oo uu muddo 10 sano ku dhow sariir la jiifay, kuna jiray xaalad miyir la’aan ah, isagoo xaalad raashinka lagu siinayay cirbad.
Fanaanka ayaa wax daryeel caafimaad oo dibadda ah ka helin dowladda Soomaaliyeed, mudadii uu xanuunsanaa, mana jirin Madax iska xil saartay, marka laga reebo fanaaniin soo taageerayay iyo dad kale oo Soomaaliyeed.
Allaha u naxariistee Fanaan Cabdi Tahliil ayaa ku dhashay Gobolada Dhexe sanadkii 1953-dii, waxaa uu ka tirsanaa Hobolada Qaranka ee Waaberi.
Waxaa lagu xusuustaa heeso isugu jiray waddani, Jaceyl, wacyigelin iyo dhiiragelin oo uu qaaday fanaanka, sidoo kale waxaa uu heeso la qaaday fanaaniinta hablaha ee caanka ahaa sida Hiba Nuura, iyo Xaliima Khaliif Magool iyo kuwa kale.
Heesaha lagu xusuusto ayaa waxaa ka mid ah Heesta Onkod Roob ma daayo, Soomaali Soomaali baa leh, Heesta Ugaaso iyo heeso kale.